Ibheyili e-Dubai: Ukukhululwa Lapho Uboshwa | Inkampani Yomthetho Eklonyelisiwe
Ukukhishwa Lapho Uboshiwe
Ibheyili eDubai, UAE
Ibheyili inqubo esemthethweni yokunika umuntu osolwa icala icala ukukhishwa kwesikhashana ngokufaka imali, i-bond, noma isiqinisekiso sepasipoti kuze kube kuphothulwa uphenyo noma lapho inkantolo ithatha isinqumo ngaleli cala. Inqubo yebheyili ye-UAE ayihlukile kunalokho okutholakala kwamanye amazwe emhlabeni jikelele.
Ukuphuma ejele ngebheyili kungaba lula
imithetho yasendaweni ye-UAE
Liqondise Ngokukhishwa Kwibheyili Phezu kokuboshwa Ku-UAE
Inqubo yebheyili uma iboshwe ngokomthetho we-UAE
I-Athikili 111 ye-UAE Criminal Procedures Law ibusa inqubo engokomthetho yokunikeza ibheyili. Ngokusho kwawo, ibheyili isetshenziswa ikakhulukazi emacaleni amancane, ukungaziphathi kahle, ahlanganisa isheke elibhampa namanye. Kodwa mayelana namacala abucayi kakhulu njengokubulala, ukweba, noma ukugebenga, okuza nesigwebo sedilikajele noma isigwebo sentambo, ibheyili ayisebenzi. Sishayele manje ukuze uthole Ukuqokwa Okuphuthumayo Nomhlangano ku- +971506531334 +971558018669
Lapho umuntu osolwa eboshiwe ngamaphoyisa e-UAE nangaphambi kokuba icala lidluliselwe enkantolo, lowo muntu noma ummeli wakhe, noma isihlobo sakhe singahambisa isicelo sokukhishwa ngebheyili kuMshushisi Womphakathi. Umshushisi woMphakathi ubhekene necala ngokwenza zonke izinqumo zebheyili kulo lonke uphenyo.
Iphasiphothi yesiqinisekiso ingahanjiswa
Ibheyili igunyaza ukuvela kwabamangalelwa ukuthi kuqhubeke inqubo yasenkantolo futhi baqinisekise ukuthi abazami ukubalekela izwe. Futhi ukuqinisekisa lokhu, ipasipoti yomuntu osolwayo ligcinwa, noma lelo lamalungu omndeni wakhe, noma isiqinisekiso. Ibheyili yezezimali nayo ingafakwa ngaphansi kweSigaba 122 soMthetho Wobugebengu .. Lokhu kungenziwa nge-passport noma ngaphandle kodwa kususelwa esinqumweni soMshushisi noma iJaji. Kodwa-ke, kungukuqonda kweNkantolo ye-UAE ukuthi inikeze noma inqabe. Imvamisa, inkantolo inika ibheyili kepha sidinga imininingwane efanele futhi ephelele yokululeka ngokufanele.
Umqinisekisi othile-oqinisekisa (unesibopho ngokuphelele) nokuziphatha kommangalelwa lapho emkhulula ejele. Isiqinisekiso kufanele siqaphele futhi siqaphele ukugcina ipasipoti yakhe. Imali yebheyili iyitayitela eliphethe elisayinwe ngumqinisekisi elimenza abhekane nezenzo zommangalelwa, lapho ehlulekile ukuya enkantolo.
Yiba nabameli abangochwepheshe bokuthola ibheyili
Ngokuya ngobuntu kanye nobunzima becala, singenza isicelo sebheyili eDubai, izicelo zebheyili zijatshulelwa yizinkantolo. Singabameli abangochwepheshe bokuthola ibheyili kumakhasimende ethu asolwa ngokusho komthetho wenqubo yobugebengu futhi sikukhiphe ejele.
Ibheyili inganikezwa ngu:
Amaphoyisa, ngaphambi kokudlulisela leli cala ku-Public Prosecution;
Ukushushiswa Komphakathi, ngaphambi kokudlulisela icala enkantolo;
Inkantolo, ngaphambi kokukhipha isinqumo.
Izidingo Zepasipoti ukuze ufaneleke ukuhanjiswa njengesiqinisekiso sebheyili:
Ipasipoti kufanele isebenze.
I-Visa kumele isebenze.
Lokhu kusho ukuthi umuntu oseqile i-visa yakhe ngeke akwazi ukuthumela iPasipoti yakhe njengesiqinisekiso sebheyili. Lapho umsolwa esethole ukukhishwa kwebheyili, uzonikezwa okuthiwa yi- "Qafala," okuwumbhalo webheyili ohlanganisa imibandela yebheyili.
Lapho icala selichithwa ekugcineni noma livaliwe, makube inqubo yokuphenya noma ngemuva kokuba idluliselwe enkantolo, isiqinisekiso sezezimali esifakwe njengebheyili sizobuyiselwa ngokugcwele futhi umqinisekisi ukhishwe kunoma yisiphi isenzo esisayiniwe.
Isigaba 115 soMthetho Wezinqubo Zobulelesi sihlinzekela ukwesulwa kwebheyili noma ngabe ivunyelwe noma seyenziwe, ngokwesizathu esilandelayo:
Uma ukuhlinzekwa kwebheyili kuphulwe umsolwa, isibonelo, ukungayi emihlanganweni yophenyo noma yokuqokwa njengoba kushiwo yi-Public Prosecution.
Uma kuvela izimo ezintsha kuleli cala ezidinga ukuthatha izinyathelo ezinjengalezi, ngokwesibonelo, uma umsolwa ebuye efanelekela lelo cala, ukukhululwa ngebheyili kukhutshaziwe.
Ukuphuma ejele ngebheyili kungaba lula uma ufaka usizo lommeli wokuzivikela obugebengu onolwazi nowaziyo onolwazi ngemithetho yendawo ye-UAE. Lolu hlobo lommeli lungahlala luhlinzeka ngezeluleko ngemithetho esebenzayo nokumelwa okusemthethweni ukusiza ukuvikela ukukhululwa.
Sishayele manje ukuze uthole isikhathi esiphuthumayo ku- + 971506531334 + 971558018669